Cali Dheere: Dhalinyarada Somaliyeed ee badaha ku dhimanaysa waa wax lagu khasbay.. - iftineducation.com
iftineducation.com – Cali Maxamuud Raage (Cali Dheere), Afhayeenka Guud ee Ururka Al Shabaab, ayaa wuxuu difaacay dhalinyarada Somaliyeed ee sida joogtada ihi ugu la’anaysa badaha, xilli ay ka cararayaan dalkooda.
Afhayeenka, ayaa tilmaamay inaanay dhalintu wax shaqo ihi ku haysan dalka, isagoo intaa ku daray in ilihii ugu muhiimsanaa ee dhaqaalaha wadanku, ay la wareegeen waxa uu ugu yeeray cadow soo duulay.
Cali Maxamuud Raage (Cali Dheere) oo caawa la hadlay Warbaahinta ku hadasha afka Al Shabaab, ayaa yiri “Waxaa mudan in la isweydiiyo sababta markasta dhalinyaradu ay badahaan ugu baaba’ayaan, oo marba marka ka dambeyso ay u sii darsanayso, maxay tahay? Waxaad maqleysaa in badan iyadoo la canaananaayo dhalinyarada, laguna eedeynaayo tahriibka ay tahriibeen. Marka canaantaa ma leeyihiin mise malaha? Qayb ka mid ah haku lahaadaan, laakiin inta badan waxaan leenahay asbaab kale ayaa jirta.”
“Sababta ugu wayn ee dadkan dhalinyarada ah ay u tahriibayaan, waa sabab runtii dalkeena taala, ummada Muslimiinta ah ee ku nool Somaliya inteeda badana ay ka dharagsan yihiin. Waxaad ogtihiin dalkeena Somaliya waxaa ku soo duulay cadow kala duwan oo noocyo badan, iyadoo uu qabsaday dhammaan ilihii dhaqaalaha ee dalkani uu lahaa, isla-markaana cunaqabateen ku soo rogay wax alla wixii wadankan uu lahaa, ilo dhaqaale nooca ay doonaan ha noqdaan.”
“Tusaale waxaa idinkugu filan waxaa weeye dhalinyarada maanta badaha ku halaagsantay intooda badan, sida xogtooda la helaayo waxaa weeye inay ahaayeen dad aqoonyahano ah, Dugsi Sare ka baxeen, qaarkood laga yaabo inay Jaamacado ka baxeen, dalkan bilic ahna ee ay lahaayeena, ay ka carareen.”
“Wadankan tusaale waxaa idinkugu filan Dekedihiisii, Madaaradiisii, ganacsigiisii iyo dhaqaalihii uu lahaa oo dhan, waxaa gacanta loo geliyay shisheeye. Tusaale ahaan Dekedii Muqdisho oo aad ogtihiin waxaa ku noolleed shan kun oo qof in ka badan, shantii kun waala ceyriyay, gacantoodaa la mariyay, waxaana lagu wareejiyay hay’aad shisheeye. Dadkaasi waxay isugu jireen dhalinyaro, odayaal iyo dad dhex dhexaad ah. Halkee aadaayaan? Dantu waxay ku khasabtay inay badaha galaan.”
Dadka badankii, ayaa qaba in Al Shabaab ay qayb ka tahay fursadaha shaqo la’aaneed ee maanta ka jirta dalka, maadaama ay dagaalo ka wadaan inta badan Somaliya, isla-markaana ay ka soo horjeedaan jiritaanka Dowladda Dhexe Somaliya iyo Maamul Goboleedyadaba.
Haddii Al Shabaab ay colaadaha ku bedeli laheyd wada hadalo iyo waan-waan nabadeed, ayaa waxay taasi qayb ka noqon kartay dadaalada lagu horumarinaayo dalka, isla-markaana ay abuuri laheyd fursado shaqo.